Khadka Internetka Muqdisho oo lafilayo in Sedax Maalmood Gudahood lagu Cillad Bixiyo.
Thursday July 13, 2017 - 09:10:55 in Wararka by
Inta magaalooyinka waaweyn ee dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya waxaa wali ka maqan khadka Internetka arrinkaas oo saameyn ballaaran yeeshay.
Maqnaashiyaha Internetka oo foodda sii gelinaya maalintii 18-aad ayaa sababay khasaara malaayiyadeed oo lagu qiyaasay malaayiin dollar waxaana hakad kujira adeegyo muhiim u ahaa bulshada.
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan markab kasoo shiraacday xeebaha wadanka Cummaan uu soo gaaray xeebaha magaalada Muqdisho waxaa socda dadaallo ballaaran oo ladoonayo in lagu cillad bixiyo xarkaha internetka Fiber Optic-ga oo markab ganacsi uu jiiray 25,June 2017.
Shirkadda Dalkom oo haysata qandaraaska Internerka Fiber-ka ayaa iyana sheegtay in waqti dhow la xallin doono dhibaatada internetka ee kajirta magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku dhow.
Cabdi Canshuur oo ah wasiirka boostada iyo isgaarsiinta DF-ka ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in Muqdisho uusoo gaaray Markabkii cillad bixin lahaa xarkaha internetka wuxuuna muujiyay rejo ah in sedax maalmood gudahood dib loogusoo celiyo internetka.
‘’ Markabkii cilidbixinta waa uu yimid waxaa uu hadda howsha ka bilaabay halka ay ka soo leexato Fiilada Internet-ka ee Fiber Optic, Jimcaha ayaa la filayaa in uu soo gaaro dekedda weyn ee Muqdisho’’ ayuu yiri Canshuur.
Waxaa beenoobay warar horay usoo baxay oo sheegayay in sababta internetku ugo'ay ay tahay shirkadda dalkom oo bixin waysay lacago kira ah oo ay ku laheyd shirkadda Fiber Optic, warkaas oo si aad ah layskula dhax qaaday magaalada Muqdisho oo ah meesha ugu daran ee Internet la'aantu ka jirto.